Izixhobo zasesitovu abavelisi kunye nababoneleli - China iOven accessories accessories Factory
Inkxaso yomnyango wegesi yokupheka ngegesi
Intshayelelo: Inkxaso yomnyango wegesi yokupheka ngegesi. Inkxaso yomnyango ngasekhohlo nangasekunene ngamacala amabini. Ngokwesiqhelo sebenzisa ii-oveni zombane. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-07
Isimbozo seoyile yokupheka ngegesi
Intshayelelo: Isimbozo seoyile yokupheka ngegesi. Isimbozo sesitovu ngasekhohlo nangasekunene kumacala amabini sisibini. Ngokwesiqhelo sebenzisa ii-oveni zombane. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-19
Inombolo yomzekelo: YL-20
Ihenjisi yomnyango weoveni yokupheka yegesi
Intshayelelo: Umnyango wegesi yokupheka ihenjisi yomnyango wehenjisi ngasekhohlo nangasekunene ngamacala amabini. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-17
Intshayelelo: Indlebe yokupheka i-oveni yokupheka yomnyango we-oveni yodwa ikhohlo kwaye icala lasekunene zizibini ezi-1. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
I-shaft yesikwere engenasici ye-BBQ i-ovenpiti / ifolokhwe / i-roaster
Intshayelelo: I-shaft yesikwere engenasici ye-BBQ i-ovenpiti / ifolokhwe / i-roaster. Ukusetyenziswa kweturnspit kwii-oveni zombane. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-18
Igesi yokupheka i-oveni yedrowa yehenjisi / indawo yasentwasahlobo
Intshayelelo: Igesi yokupheka i-oveni yedrowa yehenjisi / indawo yasentwasahlobo. Ihenjisi yokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni yokupheka okanye iidrowa. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-11
I-shaft ye-stainless steel shaft ye-BBQ ijikaji / ifolokhwe / i-roaster
Intshayelelo: I-shaft ye-stainless steel shaft ye-BBQ ijikaji / ifolokhwe / i-roaster. Ukusetyenziswa kweturnspit kwii-oveni zombane. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-06
Intshayelelo: Umnyango wegesi yokupheka ngehenjisi ucango lomnyango usekhohlo kwaye icala lasekunene zizibini ezi-1. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-04
Ihenjisi encinci yomnyango wegesi yokupheka
Intshayelelo: Umnyango omncinci wokupheka i-oveni ucango lomnyango ushiyekile kwaye icala lasekunene zizibini ezi-1. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-03
Iindlebe eziphindwe kabini zehenjisi yomnyango weoveni
Intshayelelo:Iindlebe eziphindwe kabini zompheki womnyango we-oveni umnyango ushiyeke kwaye icala lasekunene zizibini ezi-1. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-02